Nnukwu data na e-commerce | ECommerce ozi ọma
Ngosiputa nke Facebook debacle tinyere Cambridge Analytica na otutu data anakọtara site na 87 nde ndị ọrụ, nke ejiri ya mee ntuli aka ntuli aka nke 2016, gosipụtara nnukwu data dịka anụ ọhịa dị ike ọ nwere ike ịbụ.
Ọbụna mgbe ejiri ezi ebumnuche mee ihe, dịka onye isi ụlọ ọrụ Facebook Mark Zuckerberg kwuru na ụlọ ọrụ ya mere, data nwere ike iduga ndị mmadụ na azụmaahịa.
Hardwired dives na-abawanye na okwu a: “Oge a na-enye ọtụtụ mgbanwe, mana ntakịrị data kwa agbanwe agbanwe. Ya mere mmekọrịta adịgboroja na-eto nke ukwuu, karịa karịa ezigbo ozi. Yabụ: Nnukwu data nwere ike ịpụta ozi ndị ọzọ, mana ọ pụtakwara ozi ụgha.
1 Ndabere na Nnukwu data
2 Dịkwuo ahịa
3 Kedu ihe bụ nnukwu data na gịnị kpatara ị ga-eji jiri ya?
4 Uru dị na iji nnukwu data na e-azụmahịa
5 Jide ndị ahịa
6 Kedu ihe bụ nnukwu data na gịnị kpatara ị ga-eji jiri ya?
7 You chọrọ ozi ndị ọzọ dị ka nke a?
8 Nnyocha nyocha BigCommerce
Ndabere na Nnukwu data
Nchịkọta Cherry nke enwere ike iji nnukwu data mee ka ị nwee ike ịgbanwe ozi ahụ iji gwa gị ihe ịchọrọ, nke dị mma maka akụkọ, mana ihe ọjọọ maka azụmahịa.
Agbanyeghị, nke ahụ apụtaghị na nnukwu data enweghị ike ịbụ ngwaọrụ dị mkpa na ngwa agha gị iji bulie ọwa ecommerce gị.
Igodo nke ijikwa data buru ibu n'ụzọ ọ na-arụ ọrụ maka gị chọrọ ka ị lekwasị anya n'ihe abụọ:
Gburugburu gị nke iru eru.
Wayzọ ụwa si arụ ọrụ.
Otu n'ime ihe kachasị atọ ụtọ ma sie ike banyere ịme saịtị ma ọ bụ ọwa e-commerce bụ enweghị atụ - ọ bụ ezie na enwere ike ịpụta n'ihu Senate, dịka Zuckerberg mere, ọ nwere ike ọ bụghị ụdị obi ụtọ nke onye ọ bụla nwere azụmaahịa na-azụ ahịa. chọrọ itinye aka.
Agbanyeghị, teknụzụ na omume mmadụ na-agbanwe mgbe niile, yana onye azụmaahịa ma ọ bụ onye njikwa azụmaahịa, ị ga-adị njikere ịmegharị.
N'ihi ịdị mfe nke ịmepụta ma na-echekwa ụlọ ahịa e-commerce, yana ịrị elu nke micro-ụdị, ahịa taa na-asọ asọ asọmpi na-ada ada ma na-ebelata iguzosi ike n'ihe ndị ahịa.
Azụmaahịa dị n'ịntanetị na-achọkarị ụzọ iji jide ndị ahịa ma melite ahụmịhe ndị ahịa, n'amaghị na ihe ngwọta dị na mkpịsị aka ha.
N'agbanyeghị oke asọmpi, ndị nwe azụmaahịa e-commerce nwere uru karịa ndị na-ere ahịa ọdịnala nwere ụlọ ahịa brik na ngwa agha.
Azụmahịa elektrọnik dị agile ma na-eme mgbanwe; Businesseslọ ọrụ ndị a anaghị anọ n'otu ebe ma na-enwekarị ngwongwo ma ọ bụ na-ere ahịa na-echegbu onwe ha mgbe ị na-eji 3PL ma ọ bụ na-agba naanị ọrụ e-commerce.
E-commerce nwere ikike iru ahịa zuru ụwa ọnụ, na ịnweta ozi nke ndị na-ere ahịa na-enweghị.
Agbanyeghị, ọ dị mkpa karịa na ndị nwe azụmaahịa na ndị njikwa azụmaahịa na-arụ ọrụ n'ime ogo ha.
Onye ọ bụla nwere okirikiri ikike ruru eru site n'ọmụmụ na ahụmịhe. Isi ihe bụ ịrụ ọrụ n'ime gburugburu a ma mee ka ọrụ ha dịkwuo iji mepụta nrụpụta gị.
Mgbe ejiri ihe ọmụma miri emi banyere ahịa, ngwaahịa ma ọ bụ ndị ahịa bịara nke ọma, enwere ike ị nweta ụgwọ ọrụ ka ukwuu maka otu mbọ dị ka onye na-arụ ọrụ n'èzí asọmpi ha.
Dika Warren nkuru n'onwe dere na akwukwo ozi sitere na Onye isi ala na 1996, “Ihe onye ocho ahia choro bu ikike inyocha ahia di nma. Mara na okwu a "họpụtara": Ikwesighi ịbụ ọkachamara na ụlọ ọrụ niile, ma ọ bụ ọtụtụ. Naanị ị ga-enwe ike inyocha ụlọ ọrụ ndị dị n'ime ogo gị. Ogo nke gburugburu ahụ adịghị ezigbo mkpa; Otú ọ dị, ịmara oke gị dị oké mkpa.
Ijikọta nghọta gị banyere etu ụwa n'ezie si arụ ọrụ yana gburugburu ikike gị ga - enye gị ohere iji nnukwu data mee ihe ga - aba uru gị.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ nwere ike inyere gị aka iwulite azụmahịa ecommerce na-ebugharị data.
Kedu ihe bụ nnukwu data na gịnị kpatara ị ga-eji jiri ya?
Nnukwu data bụ a buzzword mgbe ọ na-abịa na njikwa azụmahịa nke oge a. Ọ na-ezo aka na nnukwu data data enwere ike nyochaa iji kpughee usoro na omume na omume mmadụ.
Site na ndi mmadu na emeputa ihe omuma 1.7MB nke ohuru na nkeji abuo, igwe data dijitalụ anyi a na-achoputa ga-eto site na 4.4 zettabytes ruo 44 zettabytes (ma obu 44 puku ijeri gigabytes) site na 2020.
E-azụmahịa nyiwe dị ka BigCommerce na-enye ndị ahịa ohere ịnweta data omume ndị ahịa, nke ndị nwe ụlọ ahịa nwere ike iji mee mkpebi ha maara nke ọma.
Agbanyeghị, n'agbanyeghị inwe "ike" dị ukwuu n'aka ha, ejiri ihe na-erughị 0,5% nke data dị maka ebumnuche ndị a.
Na nke a, anyị ga-ahụ otu ị ga - esi nweta nnukwu data ecommerce buru ibu iji bulie azụmaahịa gị ma nyere ndị ahịa gị aka.
Uru dị na iji nnukwu data na e-azụmahịa
Dabere na nyocha BARC, ụfọdụ uru dị na iji nnukwu data gụnyere:
Mee mkpebi dị mma karị (69%).
Njikwa ka mma nke usoro arụmọrụ (54%).
Nghọta ka mma banyere ndị ahịa (52%).
Mbelata ego (47%).
Nke a dị oke mkpa maka azụmaahịa e-commerce. Ka ị na-ebuwanye ibu, "ịnweta geeky" gbasara data gị na-adịwanye mkpa. Ecommerce azụmaahịa na-azụ ahịa na-atụle ma na-emezi ihe ndị a:
Melite nyocha nke ndị zụrụ ahịa.
Melite ọrụ ndị ahịa.
Hazie ahụmịhe ndị ahịa.
Inye nhazi ịkwụ ụgwọ ntanetị dị nchebe karị.
Melite mgbasa ozi ezubere iche.
Etu esi eji nnukwu data maka ọganiihu azụmaahịa Ecommerce
Nyocha nke ndị na-azụ ahịa.
Nnukwu data bara uru maka ịzụlite onye zụrụ personas ma ọ bụ profaịlụ.
Nke a na-enyere gị aka ịchọpụta mmasị ndị ahịa, dịka ngwaahịa ndị kachasị masị ha ma ọ bụ awa ole ha na-azụkarị.
Enwere ike iji data a iji melite arụmọrụ gị.
Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike iji ozi gbasara oge ire elekere kachasị elu iji tufuo oke ego na ahịa ahịa ma ọ bụ mee mgbasa ozi mmekọrịta n'oge ndị a.
Ecommerce buru ibu data nwekwara ike ikpughe ụfọdụ agwa ịzụrụ na-atụghị anya ya.
Dịka ọmụmaatụ, iji nnukwu data, Walmart chọpụtara na ndị na-azụta diaper na-azụkwa biya. Chegodi ohere nkwalite obe ...
Maka ụlọ ọrụ na-eji teknụzụ SaaS ma ọ bụ ngwaọrụ nyocha data, ụdị ozi a na-adịkarị mfe nchọpụta.
Jide ndị ahịa
Ọtụtụ ụdị na-eche na ịnweta nnukwu data nwere oke na nnukwu ndị na-ere ahịa nwere ike imeli otu ụlọ ma ọ bụ ndị nwere ike ịzụta data site na ndị na-ere data.
Ga-enwe ọ toụ ịchọpụta na arụmụka a ezighi ezi, ebe ọbụnadị azụmaahịa pere mpe nwere oke iji nweta ma nyochaa data e-commerce buru ibu.
You chọrọ ozi ndị ọzọ dị ka nke a?
Anyị ozi bụ inye ulo oru dị ka gị na ụlọ ọrụ na-eduga ahịa na ahịa Atụmatụ, Atụmatụ, na ihe ọmụma na-ewu ọzọ na-ụlọ ika. Echefula ozi. Idenye aha na anyị kwa izu akwụkwọ akụkọ.
Nnyocha nyocha BigCommerce
BigCommerce Insights Analytics na-eji ụdị ozi a akpaghị aka.
2. Ọrụ ndị ahịa.
Ọrụ ndị ahịa na-arụ ọrụ dị oke mkpa na azụmahịa e-commerce.
Ọ na-efu 5 ugboro obere iji jide ndị ahịa karịa ka ọ na-enweta iji nweta ndị ọhụrụ, ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe na-etinye ihe ruru 67% karịa ndị ahịa ọhụrụ.
Ọ bụrụ na ndị ahịa enweghị afọ ojuju, 13% n’ime ha ga-agwa mmadụ 15 ma ọ bụ karịa na ha enweghị obi ụtọ. N’aka ozo, oburu na ha nwere ezi ihe, 72% kwuru na ha g’eji 6 ma obu ndi ozo kerita ya.
Ndị na-ere ahịa ọnlaịnụ nwere ike iji nnukwu data iji nweta ahụmịhe ọrụ ndị ahịa, dị ka igosi etu oge azịza ha si dị ngwa, nke na-arụ ọrụ dị ukwuu na ọrụ ndị ahịa.
71% nke ndị ahịa ntanetị na-atụ anya ka ha nwee ike ịnweta enyemaka ntanetị na 5 nkeji.
Enwekwara ike iji nnukwu data ahụ soro oge nnyefe na ọkwa afọ ojuju ndị ahịa, ma nyere ụlọ ọrụ aka ịchọpụta nsogbu nwere ike wee dozie ha tupu onye ahịa ahụ etinye aka.
Ngwa ngwakọta na ngwa ọrụ dịka Reamaze nwere ike inyere gị aka ime nke a na nkeji oge.
Enwere m ọtụtụ ngwaahịa nkwado n'oge gara aga na ọ nweghị ihe dị mma ma ọ bụ dị mfe karịa Reamaze. Nke a bụ ngwaahịa echepụtara nke ọma yana usoro atụmatụ zuru oke. O were m ihe dị ka nkeji 10 ịtọlite ​​ihe niile. N'ezie.
Enwere m ike inyere ndị ahịa aka iji Live Chat ozugbo na ụlọ ahịa m. Enwere m ike ịhụ ihe ndị ahịa na-eme na ebe ha na-aga. Ọ na-arụ ọrụ na ozi ịntanetị m na akaụntụ mmekọrịta! ». N'aka ozo, oburu na ha nwere ezi ihe, 72% kwuru na ha gesoro ya 6 ma obu ndi ozo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Nnukwu data na e-commerce